कोरोनाको विरामी बाहिर निस्के १२ वर्ष जेल ! « Deshko News
कोरोनाको विरामी बाहिर निस्के १२ वर्ष जेल !
बेल्जियममा कोरोना भाइरस संक्रमित बढेपनि लकडाउन भने खुकुलो बनाउने भएको छ । राष्ट्रिय सुरक्षा परिषदले करिब पाँच हप्ताको लकडाउनपछि लकडाउन खुकुलो पार्ने रणनीतिहरु तय गरेको हो। लकडाउन विभिन्न चरणमा खुलाउने तयारी सरकारले गरेको छ ।
लकडाउन खुकुलो बनाउने भएपनि कोरोनाको संक्रमण रोक्न भने सतर्कता अपनाउने छ । सामाजिक दुरीको नियम कायम गरिनेछ । नियमित हात धुने, हाछ्यु गर्दा कुहिनामा गर्ने कुराको निरन्तराताका लागि पनि सुझाइएको छ।
संक्रमित बाहिर निस्के जेल सजाय
लकडाउन खुकुलो बनाउने निर्णयसंगै कोरोना संक्रमित बिरामीलाई घरभन्दा बाहिर निस्कन बन्देज लाईको छ । कोरोना संक्रमित व्यक्ति बाहिर निस्केमा १२ वर्षसम्मको जेल सजाय हुन सक्ने प्रावधान जारी गरिएको छ।
हरेक नागरिकले कम्तिमा एउटा मास्क निःशुल्क प्राप्त गर्नेछ। १२ वर्षभन्दा माथिकाले स्कुल, सार्वजनिक यातायात र सार्वजनिक स्थलमा अनिवार्य मास्क लगाउनुपर्ने छ। मास्क नहुनेले नाक छोप्नेगरी सल वा गलबन्दी वा अन्य कपडा प्रयोग गर्नुपर्नेछ।
सकेसम्म साइकल, मोटर साइकल वा आफ्नो प्राइभेट गाडी प्रयोग गर्नको लागि अनुरोध गरिएको छ। अति आबश्यक बाहेकको कारणमा सार्बजनिक यातायात प्रयोग नगर्न अनुरोध गरिएको छ र प्रयोग गर्न परेमापनि पिक आवरमा सकभर प्रयोग नगर्न भनिएको छ।एजेन्सी